Dowladda Itoobiya oo ka soo horjeeda in xilka laga qaado Ra’isul Wasaare Geedi
Wararkii: July 24, 207
Dowladda Itoobiya oo ka soo horjeeda in xilka laga qaado Ra’isul Wasaaraha DFKMG Geedi
Dad fara badan oo Soomaali ah oo ka soo barkacay Soonka Shanaad ee Itoobiya
Qaraxyo weli ka sii socda Magalada Muqdisho
Magaalada Asmara oo martigelineysa kulan ay ka soo qaybgalayaan 700 oo qof
Wararka naga soo gaaraya Magaalada Baydhabo waxay sheegayaan in qaar ka mid ah xildhibaanada Baarlamaana ay gudbiyeen dhawaan mooshin ka dhan Ra’isul Wasaaraha DFKMG Cali Max’ed, kaasoo ku aadan in xilka laga qaado Ra’isul Wasaarenimo, ama uu mar kale soo magacaabo Madaxweynuhu, maadaama ay dhamaatay xiligii horey loogu ballamay, waxaana Magaalada Baydhabo ka socda kulamo hoosaadyo ay leeyihiin xildhibaanada, kaas oo ku aadan sidii loola xisaabtami lahaa dowladda federaalke ee madaxda u yahay Cali Max’ed Geedi.
Caasha Axmed Cabdalla oo ka mid ah Xildhibaanada Baarlamaanka ayaa waxa ay sheegtay in Ra’isul Wasaare Cali Max’ed Geedi uu xilkiisii dhamaaday, waxaana arintaani in lag hadlo hor taagan Madaxweyne C/llaahi Yuusuf Axmed “Ma garnyo sababta uu C/llaahi Yuusuf uga hadli la’ yahay xil ka qaadista Ra’isul Wasaare Cali Max’ed Geedi, haddii kale waa in C/llaahi Yuusuf uu mar kale soo magacaabaa Ra’isul Wasaare Geedi” ayay tiri Caasha Axmed Cabdalla. Waxaa maalintii shalay ahayd Magaalada Baydhabo kulan ku yeeshay xildhibaanada Baarlamaanka waxaan looga hadlay sidii loola xisaabtami lahaa Dowladda Federaalka, gaar ahaan wixii u qabsoomay mudadii ay jirtay iyo waliba daqligii u soo xarooday xiligaasi, waxaa la filayaa in dhawaan Madaxweyne C/llahi Yuusuf iyo Ra’isul Wasaare Cali Max’ed Geedi ay u baqoolaan Baydhabo si ay u hortagaan xildhibaanad.
Dhanka kale Dowladda Itoobiya ayaa Baarlamanka ku cadaadineysa in aan marnab xilka laga qaadin Cali Max’ed Geedi. Warar ayaa waxay sheegayaan in C/llaahi Yuusuf ay Dowladda Itoobiya ka dalbaneyso in uu mar kale soo magcaabo Cali Max’ed Geedi. Baarlamaanka Dowladda Federaalka ayaa waaydan ku maqnaa fasaxa, waxaan haatan hor yaal arimo badan oo ay ugu horeyso arrinta Ra’isul Wasaarah, nabadgelyada wadanka iyo heshiisyo ay horey Dowladdu ula gashay shirkado iyo Dowlado.
Soomaali u badan reer guuraa oo watay xoolahoodii ayaa ka soo carary deegaano ka tirsan dalka Itoobiya, gaar ahaan Soonka shanaad ee ay Soomaalidu degto, kadib markii ay dadkaasi u adkeysan waayeen xasuuq iyo barakicin aad u xoogan.
Dadkaas ayaa waxay soo gaareen deegaano ka tirsan Cabudwaaq, waxaana la sheegayaa in halkaasi ay dhibaatooyin badan ku hayaan.
Qaar ka mid ah dadkaasi ayaa waxay sheegeen in Ciidamad Itoobiya ka laayeen dad badan, waxayna sidoo kale sheegeen in ay Soomaaliya u soo aadeen sidii ay uga badbaadin lahaayeen xasuuqaasi.
Deegaanad laga soo barkacay waxa ka mid ah Wardheer, Shiilaawo, Dhaga-buur iyo deegaano kale.
Barakacaan ayaa la sheegay in uu bilowday markii ciidamo ka tirsan Jabhadda ONLF ay Bishii April weerareen xarun ay lahayd shirkad qodda shidaalka oo ku taal deegaanka Bacoole. Dhanka kale ciidamad Jabhadda ONLF ayaa waxay wadan dagaalada ay ku hayaan ciidamada Itoobiya, waxaana wadooyinka loo geliyaa miinooyin ay khasaarooyin ka soo gaaraan Ciidamad Itoobiya.
Iyadoo weli ay socdan baaritaanda ay ciidamada Dowladda ka wadan Magaalada Muqdisho ayaa waxa weli socda qaraxyo lala beegsanyo ciidamada Dolwadda Federaalka.
Qarixii ugu horeeyey waxa uu ka dhacay Isgoyska Bakaaraha kadib markii lala beegsaday gaari ay lahaayeen ciidamada Dowladda, waxaan la sheegay in ay khasaaro ka soo gaartay dhowr askari oo saarna gaari, iyadoo rasaas ay fureen ciidamaduna ay dad rayid ahi wax ku noqdeen, sidoo kale is rasaaseyn ka dhacday Isgoyska Black-sea ayaa waxa ku dhaawacmay dhowr qofood, kadib markii ay dowladda ay rasaas ku fureen dhallinyaro ay ka shakiyeen.
Habeen hore ayay ahayd markii ay qaraxyo ka dhaceen Isgoyska Hawl-wadaag iyo midka Aadan Cadde, kadib markii lala beegsaday ciidamo Dowladda ah oo halkaasi ku sugnaaa.
Taliyaha ciidanka Booliiska Cabdi Xasan Cawaale (Qaybdiid) ayaa waxa uu sheegay in ciidamada Booliiska ay sii wadi doonaan hawlaha baaritaanda ah ee ay ka wadaan Suuqa Bakaaraha, tan iyo inta laga xaqiijinayo waxa uu ugu yeeray nabadgelyada suuqa weyn ee Magaalada Muqdisho ee Bakaarah.
Wararka ka imaanaya Magaalada Asmara ee dalka Ereteriya waxay sheegayaan in magaaladaasi ay martigelin doonto kulan ay isugu imaan doonaan Siyaasiiyiin, Culuma’udiin, Waxgarad iyo Aqoonyahano ka tirsan dadka Soomaaliyeed ee ku nool dalka gudihiisa iyo dibaddiisa, waxaan lagu waramay in dad gaarya ilaa iyo 700 qof ay halkaasi isugu tagi doonaan, iyadooi laga arinsan doono sidii loo dhisi lahaa gole horseed u noqda waxa loogu yeeray sidii ay Soomaaliya u heli lahyd Dwlad, isla markaan dalka looga saari ciidamada Itoobiya.
Warar ayaa waxay sheegayan in dad ku nool caasimadda Soomaaliya ee Muqdisho iyo gobalada dalka ay soo gaareen waraaqihii casuumaadda ee ay kaga qaybgali lahaa kulankaasi oo lagu wado in uu dhaco bisha Sep ee fooda nagu soo haysa. Guddiga qaban-qaabda ee kulankaasi ayaa waxay sheegeen in dhawaab dalalka dibadda ay u ambabixi doonaan wufuud kal duwan kuwaas oo dadka Soomaaliyeed ee dibadda ku nool kala hadli doono sidii uu u najixi lahaa kulankaasi. Sheikh Shariif sheikh Axmed oo gudodomiyihii midowga Maxaakiimta Islaamiga ayaa waxa uu sheegay in kulankaani uu muhiimad gaar ah ku fadhiyo ayna ka soo bixi doonaan natiijo wax ku ool ah.